Xog: Yaa Wada Mooshinka lagu hor istaagayo Badeecooyinka Dalka laga heli karo ee Dibadda laga keeno,? – Hornafrik Media Network
Xog: Yaa Wada Mooshinka lagu hor istaagayo Badeecooyinka Dalka laga heli karo ee Dibadda laga keeno,?
Baarlamaanka Somalia ayaa waxaa hor yaala Mooshinkii ugu Waxtarka badnaa ee Taariikhda la hor geeyo Baarlamaan Soomaaliyeed, Waxaana Mooshinkan lagu hor istaagayaa in Dalka la keeno Badeeco laga heli karo Somalia.
Mooshinkan ayaa waxaa fikirkiisa iska leh Xildhibaan Maxamad Cabdi Xayir Maareeye oo kadib ku qanciyay in ku dhow 100 Xildhibaan inay saxixaan si uu u noqdo mid buuxin kara Shuruudaha Mooshin. Waxaana kadib Mooshinkan si rasmiya ula wareegay Guddoonka Baarlamaanka Somalia taasoo muujinaysa in Mooshinka la hor gaynayo Baarlamaanka.
Mooshinkan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah in la joojiyo soo dhoofinta Jaadka oo laga keeno Kenya, taasoo ay ka dhalan karto Xasaasiyad xooggan, marka loo eego Kenya oo saamayn ku dhex leh Siyaasadda Somalia, kana hesha Dhaqaale fara badan Jaadka ay u soo dhoofiso Somalia.